U Wareejinta Dukaamaysiga Internetka ee Dukaanleyda | Martech Zone
Waxaa jira isbedel udhaxeeya tafaariiqda iyo dukaamaysiga internetka, laakiin ma hubo in qofna si dhab ah u fahmay halka aan u socono. Tartanka gardarrada ah iyo bixinta maraakiibta bilaashka ah waxay u fiican yihiin macaamiisha laakiin waxay ganacsigooda u kaxeeyaan shirkadaha ganacsiga. Isla mar ahaantaana, dukaameeyayaashu wali way jecel yihiin bandhigida iyo inay taabtaan oo ay dareemaan alaabada ay rabaan inay iibsadaan.
Caqabad kale oo haysata shirkadaha ecommerce saafi ah ayaa ah tirada sii kordheysa ee gobolada ee canshuuraha iibka u marinaya shirkadaha ecommerce sababo la xiriira cadaadis ay soo rogeen goobaha tafaariiqda. (Kani runtii wuu i xanaajiyaa… canshuuraha ayaa lagama maarmaan u ah in lagu taageero taraafikada, nabadgelyada, dabka, booliska, iwm) ee tafaariiqda tafaariiqda ah.
Tafaariiqda tafaariiqda ayaa laga yaabaa inay ka badbaado badan tahay sida dadka badankood u maleeyaan, iyadoo la siinayo qol bandhig ah iyo barta laga soo qaado dadka wax iibsanaya ee hadda doonaya. Si kastaba ha noqotee, shaki kuma jiro in iibka internetka uu wax ka beddelayo habka ganacsiga loo sameeyo. Tafaariiqleyda waa inay lahaadaan joogitaan toos ah oo khadka tooska ah ah halkaasoo ay ku dheereyn karaan gaaritaankooda si ay ugu beddelaan taraafikada aysan u soo galayn dukaanka.
eCommerce runtii waa dukaanka tafaariiqda cusub. Waxaan u abuurnay macluumaadkan si aan u siino istiraatiijiyadda xayeysiinta iyo suuqgeynta madax-madaxeed sida warshaduhu u arkaan iibka ugu badan ee internetka iyo fikradaha sababta ay dadku wax uga iibsadaan khadka tooska ah. Iibintaadu ma kordhay tan iyo markii loo wareejiyay dukaameysiga internetka Ama waxaa macquul ah inaad aragtay iibka oo yaraanaya. Haddii aad ku jirto booska tafaariiqda ama aad bixiso adeegyo laga iibsan karo khadka tooska ah, sawir-gacmeedkan ayaa adiga loogu talagalay. Peter Koeppel
Xogta hoose waxay tilmaameysaa tirada dukaamada tafaariiqda oo xiraya inta boosku sii jiro. Dukaamada tafaariiqda ayaa ka wareegaya khaanadaha wax lagu gado oo loo wareejinayo qolalka bandhigyada oo ay tahay in suuqgeynta iyo adeegga macaamiisha la wanaajiyo. Fikradayda, haddii aad leedahay dukaamo tafaariiqeed ama goob e-commerce - laakiin labadaba maahan - waxaad u jiheysan kartaa waqtiyo adag.
Koeppel Toosan waa shirkad fara badan oo kajawaab jawaab toos ah lehna khibrad ballaadhan oo ay ku maareynayso qaar ka mid ah ololeyaasha jiilka hoggaaminta ugu guuleysiga badan ee telefishanka.
Tags: ecommerceisbeddelada ecommercekoeppel toos ahpeter koeppeltafaariiqdaisbeddellada tafaariiqda
Waqti Aad Kaga Dhibato Ganacsigaaga (Ha U Waayaan Mine)